BOGEYGAA KU TAAL JIGJIGA” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
BOGEYGAA KU TAAL JIGJIGA”
A warsame 10 December 2018 10 December 2018
“Waxaan ka mid ahaa, wafdigii ballaaran oo ka qayb galayay, Bandhig-Suugaaneedkii Caalamiga ahaa ee Sayid Maxamed Cabdile Xasan Magaaladda Jigjiga, Waxaan ka baxnay Magaalada Muqdisho, Caasimadda dalka hooyo, Casarkii Arbacada, 14/11/2018.markii ay Qoraxda si dhaceyso ayaan gaarnay Magaalada Hargaysa gaar ahaan Beerta Xorriyadda. Halkaas oon ku hoyanay habeenkii Khamiista. Subaxii hore ee Khamiista, ayaan ka baxnay Magaalada Hargaysa, waxaana hore noo sii raacay marti kale oo meesha nagu sugaysay.
Markaan ku dhawaaaney Deegaanka Tog-wajaale, ayaa waxaa nooga horyimid madax ka socotay Dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada, Dareenka ma qiyaasi karo ee Meeshaas ka jirey gaar ahaan sida Quruxda Badan ee na loo dhaweeyey.
Jigjiga waxaan gaarney Duhurkii Khamiista, waxaa halkaa ka cunnay qado Qurux badan oo si wanaagsan loo diyaariyey, Qadadaas oo ahayd cuntadii innoogu horraysay ee aan ka cunno Jigjiga “Beled Soomaaliyeed”. Alla dhadhan iyo macaan badanaa cuntadaas.
Ujeedka aan halkaa u tagney oo ahayd ka qayb galka Shirk u saabsanaa Bandhg Suugaaneedkii loo sameyeey Gabayadii Alaha ha u naxariistee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan kaasoo bilowdey Sabtidii, 17/11/2018. Waxaa halkaa isugu yimid dad Qiimo ku leh Bulshada kuwaa oo Camirey Hoolka Sayidka oo aad moodid sidii maalin Xorriyadeed. Maxay kula tahay bay noqon doonaan khudbadihii shirka.
La taliya madaxweynaha arrimaha bulshada Sh Ibraahim Sh Xuseen, ayaa Daahfurey shirka, wuxuuma ku dheeraadey u jeedka Shirka, soo dhaweyn ka dib Shiikhu, waxaa uu sheegey in Madaxda mar waliba looga baahan yahay kuwa ka dhex muuqda ama ku dhex jira Bulshada Isagoo Alle uga baryey in kulamada noocaan ah uuu noo badiyo isagoo sii hadlaya una Duceynaya qabanqaabayaasha shirka waxaa uu yiri “Maddaalayaasha u xilsaaran soo dhaweynta martida. Waxaa leeyahay Waadna sharafteen waaana na Maamuusteenne Alla ha idin Maamuuso”.
Maalintii labaad iyo shirka, Bandhig-suugaaneedka Caalamiga ah ee Sayid Maxamed Cabdile Xasan, iyo hoolka Sayidka. Waxaa si weyn looga taariikh sheekeeyay Sayidka, iyo halgankii uu soo marey dad badan oo aan waxbna ka ogeyn taariikhda Siyidka ayaa halkaa ka so bartey waxaana ka mid ahaa erayadii sayidka loo tiriyey “Alla Sayidku abaal iyo ammaanba waa naga mudnaa! ‘Allow yaa darmaan Faras taqaan duqa u heenseeyo’, HA INALA DABBAALDAGEE”
Gunaanadkii Saddexdii beri ee uu bandhiga uu socdey waxay ahayd Maalmo aan ka quluubta Dadkii ka soo qayb galey aan ka tirmeyn oo qiima iyo qiira leh, dabadeed 19/11/2018, waxaa la soo gabagabeeyay shirkii noociisa kale aan hore loogu qaban deegaanka Jigjiga dadkana waxay ahaayeen kuwo ay ku reebtey Taariikh ma hadho ah ka qayb galayaasha waxay lahaayeen “Alla muxuu innooga dhammaaday!”.
Khudbadaha kala jaadka ahaa, martida mugga lahayd, waxaa barbar socday buugaagta meesha lagu soo bandhigay.
Diiwaanka Sayidka ayaa hoggaaminay buugaagta shirka Bilaysay. Waxyaabaha yaabka lahaa ee shirka qaybta ka ahaa ka sheekeynta Sayidka, Garaad Wiilwaal, Ismaaciil Mire iyo kuwa kale oo badan qaraaba dhow la ahaa isu waqti ahaayeen waana markii ugu horeysey ee aan ka qayb galo bandhig noocaan ah wuxuuna ii lahaa dareen gaar ah
Jigjiga iyo waayaheeda!
Magaalada Jigjiga, waa magaalo u dhisan hab-casri iyo cilmiba ku jiro. Guryo gaagaaban, naqshad cayn wanaagsan. Midabo ku soo jiidanaya iyo cammaarado dheedheer. Geeda jaadadka badan leh oo dherer iyo balacba leh ayaa quruxda magalaada qayb ka ah. Geedaha dushooda waxaa raxan raxan u dagan haad kala nooc ah.
Taallada Sayidka ayaa bartamaha magalaada ku astaysan. Ishaadu, markay qabato taallada Sayidka, waxaad xusuusanaysaa tii ku taallay Magaalada Muqdisho.
Suuqa Magaalada Jigjiga, markaad sidaas u soo dhex marto, adigoo dhawaan-gal ah. Miraha ugu badan ee kaa hor imanayo, waa Liin-macaan iyo Moos. Maxaa ka dhexeeyo labada! Ma arkaysid Moos illaa Liin baa ku lammaan. Tolow ma midabka Dahabiga ah ay wadagaan baa is leedahay?. Afakaaddo, waa mira kale oo si hufan aad uga heli karto Magaalada Jigjiga, Caasimadda Dowlad-deegaanka Soomaalida.
Jigjiga iyo waxbarashada
Marka la joogo waxbarasho, waxaa hogaaminayo “Jaamacadda Jigjiga”; waxaa dhigta 20,000 oo arday. Waxyaabaha ay la gaar noqotay Jaamacadda Jigjiga, waxaa ka mid ah barashada Afka hooyo.Dugsiga hoose, dhexe iyo Sare ee Jigjiga. Iskuulka Axmed Guray, Dusiga Wiilwaal. Iyo Iskuula badan. ayaa ka mid ah meelaha ee waxbarashada uga socoto sida aan hakadka lahayn..
Magaalada marka la fiiriyo xagga caafimaadka waa horumarsan tahay. Waxaa ka qayb qaadanayo caafimaadka in uu aad sarreeyo, Nadaafadda wanaagsan ee magaalada ka muuqato.waxaana ,magaalada Caafimaad u yimaada dad fara badan kuwaa oo halkaa ka hela adeegyo Caafimaad.
Magaalada Jigjiga, waxaa ku yaal gooba badan oo loogu magac daray HaldoorroSoomaliyeed. Sida: Hoolka weyn ee Sayidka oo loogu magacdaray laguna sharfay Sayid Maxamed Cabdile Xasan. Dugsiga Axmed Guray. Axmed ibn Ibrahim Al-Ghazi. Imaam Axmed Guray. Guriga Martida Qaryaan-dhoodaan. Waa Cabdullaahi Macallin Axmed ‘Dhoodaan’. Jigjiga Gerad Wilwal Airport. oo ah Garaad Xirsi Garaad Faarax Garaad Xirsi ” Wiilwaal”.
Intaas ka badanba waxaa lagu maamuusay halyeeyo Soomaaliyeed. Magaalada Jigjiga, waa kaaga dhadhamayo, macaan Dowladnimo. Allow u siyaadi samana ku waari! Hilow, waxaa ugu adag ugana ayaan xun, meel aad markaad ka baxayso u jeeleyso joogitaankeeda. u jeelay joogintaanka Jigjiga. Sidaa darteed waxaan dhihi karaa “JIGJIGA MAGAALO SOOMAALIYEED” “ kuma Iloobi doono “BOGEYGAA KU TAAL JIGJIGA” Guud ahaan waxaan halkan ku soo gabagabaynayaa, Sadarradii mudnaa in la Taariikheeyo, oo maanku tabayay.
W/D Saynab Xaaji Axmed “Ugbaad”